IXiaomi Mi A1 ifumana indawo yokhuseleko ka-Agasti | I-Androidsis
IXiaomi Mi A1 ifumana indawo yokhuseleko ka-Agasti
I-Xiaomi ibonakaliswe njengenye yeenkampani ezibonelela ngenkxaso yesoftware kwii-terminals zayo ezindala- nangakumbi nakwezintsha-ngohlaziyo nge-OTA. Oku kuboniswa yiphakheji entsha ye-firmware ekhutshelwayo A1 yam, phakathi kuluhlu oluphakathi ku-2017 oluza kusebenza kwiminyaka emibini kwintengiso.
Esi sixhobo siyi-Android One, ke asibonisi naluphi na ulwenziwo olwenziwe ngu-Xiaomi kunye nolonwabo lwayo lwe-MIUI, kwaye inenkqubo yokusebenza ye-Android Pie iinyanga ezininzi. Le OS iyahlaziywa kwiselfowuni ngokhuseleko lwamva nje olukhoyoIsiqwenga sokhuseleko samva nje sele sisasazekile emoyeni.
Uhlaziyo lwesoftware entsha olongeza indawo yokhuseleko ka-Agasti kwiXiaomi Mi A3 iza phantsi kwenombolo yokwakha i-V10.0.12.0.PDHMIXM. Inobunzima kuphela i-67.13 MB, ke le yi-firmware elula engenakuthatha ixesha ukuyikhuphela. Nangona kunjalo, iza ilayishwe ngeendlela ezahlukeneyo zokulungiswa kwe-bug kunye nokuzinziswa kwenkqubo eqhelekileyo kunye namanye amacandelo, ke izibonelelo ezizisayo azijonganga kuphela kwisebe lokhuseleko.
Xiaomi Mi A2019 Agasti 1 uhlaziyo lwesoftware
Khumbula oko Uhlaziyo lwe-OTA zihlala luthatha ixesha ukuhanjiswa ziimodeli zonke ababelwe zonaKe nceda ube nomonde ngelixa ulinde isaziso sokukhuphela kwiXiaomi Mi A1 yakho.
IXiaomi Mi A3: Uluhlu oluphakathi luhlaziywa
Ukuba awukwazi ukulinda, ungazama ukunyanzela uhlaziyo kwimenyu Cwangcisa, kodwa qiniseka ukuba uqhagamshele kwinethiwekhi ezinzileyo ye-Wi-Fi kwaye inqanaba lebhetri ubuncinci liyi-50% igcwele, ukuthintela ukusetyenziswa kwepakethi yedatha engafunekiyo kunye nokusilela kwinkqubo yokukhuphela kunye nofakelo olunokuthi luvele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IXiaomi Mi A1 ifumana indawo yokhuseleko ka-Agasti
IXiaomi Mi MIX 4 inokusebenzisa inzwa ye-Samsung ye-108 MP
I-OPPO Reno2 ene5G sele iqhubeka